IiVenkile zeApple ziyavulwa kwakhona kwiCoronavirus: Iindawo kunye namaXesha aVulekileyo - Ezintsha
Eyona Ezintsha IiVenkile zeApple ziyavulwa eMelika: Nantsi iShedyuli kunye nento ekufuneka uyazi
IiVenkile zeApple ziyavulwa eMelika: Nantsi iShedyuli kunye nento ekufuneka uyazi
I-Apple igcina e-US ukuqala kwesigaba sokuqala ukuvula kule veki.Ifoto nguSean Gallup / Getty Izithombe
Phantse iinyanga ezimbini zokuvalwa kwevenkile kwilizwe lonke ngenxa yobhubhane we-coronavirus, iApple iqalile ukuvula ngakumbi nangakumbi iindawo zayo zentengiso kwilizwe liphela. Kwiveki ephelileyo, ukuvulwa kwakhona bekuncitshiswe kakhulu, ukuqala ngendawo ezimbalwa eIdaho, eSouth Carolina, eAlabama naseAlaska.
I-Apple ineevenkile ezintandathu kuphela kula mazwe. Abane kubo banikwe isibane esiluhlaza. I-Apple Boise Idolophu yaseKapa eBoise, Idaho yavulwa ngoMvulo, nge-11 kaMeyi, ngelixa ezinye iindawo ezintathu-- Isitalato iApple King eCharleston, SC, Apple Ingqungquthela eBirmingham, Ala. kunye Isitalato iApple Bridge eHuntsville, Ala. - ivulwe ngoLwesithathu umhla we-13.
Kule veki, ukuqala ngoMvulo umhla we-18, u-Apple uza kuvula ezinye iivenkile ezingama-25 eFlorida, eHawaii, e-Oklahoma, eColorado, eCalifornia naseWashington. Iivenkile eCalifornia naseWashington ziya kubonelela ngeenkonzo zec curbside kuphela. (Jonga uluhlu lwevenkile olupheleleyo emazantsi eli nqaku.)
Ukubhengezwa ngakumbi kokuvula kulindeleke ukuba kufike ngoMeyi nangoJuni. Ungajonga imeko yevenkile ekufuphi yeApple kuyo Iphepha lokuthengisa lika-Apple .
Kwiindawo eziphinde zavulwa, iApple iya kuphumeza ukukhangela ubushushu kubathengi xa bengena kwaye, njengezona venkile zininzi zisebenza ngexesha lokuvalelwa yedwa, vumela kuphela inani eliqingqiweyo labantu ngaphakathi ngexesha elinye. Umgaqo-nkqubo, ozelwe ngaphandle kwesilumkiso, unokubangela ixesha lokulinda elongezelelweyo ngaphandle kwevenkile. Abathengi baya kuhlolisiswa nezinye iimpawu ze-COVID-19, ezifana nokukhwehlela.
Iimaski zobuso ziya kuba sisinyanzelo kuye wonke umntu ongena ezivenkileni. I-Apple iya kubonelela iimaski kubathengi abangenayo.
Iqela lethu lihlala lijonga idatha ye-heath yendawo kunye nesikhokelo sikarhulumente, kwaye nje ukuba sivule ngokukhuselekileyo iivenkile zethu, siya kuthi, ummeli we-Apple uxelele i-CNBC ngolwesihlanu.
UApple uthe izakujolisa kumntu ngamnye, iinkonzo ezizezakho kunye nenkxaso yezobuchwephesha yeGenius kwiivenkile eziphinde zavulwa kwaye ikhuthaze abathengi ukuba bathenge iimveliso kwi-intanethi zokuhambisa ngaphandle konxibelelwano okanye ivenkile.
I-Apple isebenza kwiivenkile ezingama-271 e-US kunye nama-510 kwihlabathi jikelele. Uninzi lweevenkile zeApple ngaphandle kwe China zivaliwe ukusukela phakathi ku-Matshi ngenxa yobhubhane. Kwezi veki zine zidlulileyo, khetha iindawo ezivulekileyo eMzantsi Korea (ngo-Epreli 18), e-Austria (ngoMeyi 5) nase-Australia (ngoMeyi 7). Ivenkile eJamani naseSwitzerland nazo ziya kuqala ukuvula kule veki.
Ukusukela nge-17 ka-Meyi, malunga ne-100 iivenkile zakwa-Apple kwihlabathi jikelele zaziphinde zavula iingcango kubathengi kwindawo ethile, utshilo umphathi we-Apple kunye nabasebenzi uDeirdre O'Brien ileta evulekileyo. Nangona kunjalo, njengoko i-U.S ithi ibeka esweni ngokusondeleyo ukusasazeka kwe-COVID-19 emva kokuyekisa amanyathelo okuzikhetha kwezinye iindawo zoqoqosho, iivenkile eziphinde zavulwa zeApple zingavala kwakhona ukuba amanyathelo okucinywa kwendawo abuyiselwe, U-O'Brien walumkisa .
Uluhlu lweevenkile ezivula ngeveki kaMeyi 18:
Altamonte (Altamonte Springs) ngoMeyi 18
IFlorida Mall (eOrlando): ngoMeyi 18
IMillenia (iOrlando): ngoMeyi 18
IZiko leDolophu iSt. Johns (eJacksonville): Meyi 18
UKahala (Honolulu): UCanzibe 18
I-Royal Hawaiian (Honolulu): Ngomhla we-18
UAla Moana (Honolulu): Ngomhla we-18
IWoodland Hills (iTulsa): ngoMeyi 20
IPenn Square (e-Oklahoma City): ngoMeyi 20
Ivenkile yepromenade eBriargate (Colorado Springs): ngoMeyi 18
IArden Fair (iSacramento): Ngomhla we-18 kuMeyi
I-Roseville (iRoseville): ngoMeyi 18
Isitalato i-Higuera (eSan Louis Obispo): ngoMeyi 18
IVirtile Faire (iModesto): ngoMeyi 20
Del Monte (Monterey: ngoMeyi 20
I-Fashion Fair (Fresno): Ngomhla we-20 kuMeyi
Valley Plaza (Bakersfield): Ngomhla wamashumi amabini
I-Tacoma Mall (iTacoma): ngoMeyi 18
UMazantsi (Tukwila): Meyi 18
I-Bellevue Square (i-Bellevue): ngoMeyi 18
I-River Park Square (Spokane): Ngomhla we-18 kuMeyi
IAlderwood Mall (Lynwood): Ngomhla we-18 kuMeyi
Idolophana yaseYunivesithi (Seattle) ngoMeyi 18
Uhlaziyo: Eli nqaku lihlaziyiwe ngesibhengezo esitsha sokuvula kwakhona kunye nezikhokelo zokhuselo ezihlaziyiweyo kwiveki kaMeyi 18.
'Ukungafihli nto' kwakhona 1 × 7: Umzekelo ongumfuziselo
Iimuvi ezili-10 eziBalaseleyo kwiVidiyo eNkulu yeAmazon eBhombise kwiOfisi yeBhokisi
Udliwanondlebe: UFrank Dillane 'Wokoyika Ukuhamba Abafileyo' Ufuna 'Ukuhamba Abafileyo' Crossover
Aba 'bafana bakaGilmore' baKhokelela kwiNdlela eya kuVuselelo lwaMantombazana 'eGilmore
U-Liv Tyler uthengise iNdlu yaseKhaya yeLali yaseNtshona yexesha elide nge $ 17.45 yezigidi
I-Apron eluhlaza okwesibhakabhaka yaba njani yi- $ 2 yezigidi zeNtlekele
Iintsomi ezili-10 zeLiberal zeLiberal
Abadlali 'beLizwi' banxibe uKayman noRihanna owayenguMyili wempahla
I-YouTube Star edumileyo uCharlie Green Jr. we 'The Angry Grandpa Show' Udlulile
I-Q & A: I-Stassi Schroeder kwiNkcazo yeNkcubeko yakhe ayithandayo kunye noVuyo lokuba sisiseko
Kwi-After-Party ka-Lucky Guy, uTom Hanks Uthetha ngeenyaniso ezimbini kwi-Photobomb yakhe yokudakwa
Kutheni le nto iVegan YouTuber Drama Isoloko Inamandla Kangaka?
zeziphi iipilisi zokutya ezisebenzayo
yima ubambe ixesha lomlilo 3 isiqendu 8
I-warren buffett net ixabisa i-2018
Izicwangciso ze-elon musk zeemars
Uhlala phi u-barack obama ngoku